Semalt Islamabad Specialist - Inona no Atao Botry ary Ahoana no Hamitana azy?
Olona maro no mifantoka amin'ny fametrahana teny sy fehezanteny maro miaraka amin'ny backlinks ao amin'ny sehatry ny blaogy sy ny fizarana tsetsa. Ny fomba fiasan'ny botsa sy ny sponjy ary ny fomba hametrahana ny fampahalalana ao amin'ny lahatsoratra dia mamaritra hoe ny toerana misy ny tranokalanao dia miditra ao amin'ny valin'ny fikarohana .
Sohail Sadiq, manam-pahaizana manerantany avy amin'ny Semalt , dia mifantoka amin'ny hoe tokony hampianatra ireo mpitaingina sy mpitsikilo momba ny fomba tokony hampisehoana ny pejin-tranonkalanao, ary azo atao amin'ny tag: rel = "nofollow" vatofantsika. Hihena tsikelikely ny isan'ireo rohy misy anao ary hanampy anao hihazona ny pejin'ny tranonkala mandritra ny androm-piainana.
MSNbot, Googlebot, ary Yahoo Slurp dia bots, robot, ary spiders izay tompon'andraikitra amin'ny fijinjana vaovao ho an'ny fikarohana s. Raha hitanao ny antontan'isa ao amin'ny tranonkalanao, mety ho hitanao ny Yahoo Slurp, ny Googlebot, ary ny MSNbot ho fiarahaban'ireo vahiny ary manangona angon-drakitra momba ny tranonkalanao ho an'ireo fitaovam-pikarohana ireo..Ny fijerena ireo spider sy bots dia matetika dia tiana satria midika izany fa ny habaka ny tranokala dia voatsindry saika isan'andro ary ny votoatiny dia hiseho amin'ny valin'ny fikarohana (SERP).
Inona no atao hoe spider bot?
Ny bot-ny spider dia programa manokana izay manaraka ny rohy manokana amin'ny tranonkala iray ary manangona vaovao momba ilay tranonkala hizarana amin'ny aterineto. Ohatra, ny Googlebot dia manaraka ny tenimiafin'ny SRC na HREF mba hikaroka sary sy pejy mifandraika amin'ny niche manokana. Satria ireo mpitsikilo ireo dia tsy ny programa ordinatera tena izy, tsy afaka miantehitra amin'izy ireo isika raha toa ka tratran'ny tranonkala sy bilaogy manangana azy ireo. Raha ny fijerena ny fijerena ny tranonkalanao amin'ny Googlebot, dia tokony hotadidinao fa ny pejy sy ny sary sasantsasany dia tsy ho voasokajy araka ny tokony ho izy. Na ireo pasitera malaza sy malaza aza dia mankatò ny torolalana sy ny torolalana amin'ny robots.txt. Izy io dia antontan-taratasy mifototra amin'ny informatika sy ny botsika izay tokony handinihan-dry zareo sy izay tsy tokony holazainy. Azonao atao ihany koa ny mampianatra ireo robots tsy hanaraka rohy misy pejy miaraka amin'ireo meta manokana toy ny "Googlebot".
Ahoana no hamahanana ireo bôtô?